Kwọ ụgbọala Na-aga n'ihu Na-agbanwe Ntugharị - Pedal Ma ọ bụ Lever - Potatoes News
Kwọ ụgbọ na-agbanwe agbanwe mgbe niile - pedal ma ọ bụ menjuobi
Na agrarheute na na anyị agrarheute Facebook page anyị chọrọ ịmata na a nnyocha e mere nke ịkwọ ụgbọala mode ị na-ahọrọ mgbe na-arụ ọrụ traktọ na nọgidere agbanwe transmissions. Ihe si na ya pụta juru anyị anya.
Otu esi akwọ ụgbọala ndị ọkwọ ụgbọala agbanweela n’ime iri afọ ole na ole gara aga. Kama emekọrịta gia mgbanwe gruff levers ụgbọala ọzọ na ndị ọzọ traktọ na ihe n'ikpeazụ s nnyefe .
Dabere na ika, e nwere dị iche iche na-akwọ ụgbọala azum maka akpụ akpụ traktọ na CVT nnyefe. E nwekwara ọrụ dị iche iche na traktọ chọrọ usoro ịnya ụgbọ ala dị iche iche. Ọtụtụ mgbe ajụjụ nke usoro ịkwọ ụgbọala ziri ezi na-emetụ mmụọ ma enwere mmasị, omume na ihe ndị na-adịghị amasị.
Kedu ọnọdụ ịnya ụgbọ ala ị na-eji na traktọ na-agbanwe nnyefe na-aga n'ihu?
Na agro taa na ubi anyị taa Facebook peeji anyị chọrọ na a nyocha mara ihe ịnya ụgbọ ala mode amasị gị mgbe ị na-arụ ọrụ traktọ na-agbanwe agbanwe transmissions . Nsonaazụ juru anyị anya, n'ihi na anyị atụghị anya na ọ ga-edo anya.
Strategykwọ atụmatụ nyocha n'ụzọ zuru ezu - imirikiti na-akwado ụdị ịkwọ ụgbọala a
Ihe kariri ọkara nke mmadụ 2,351 sonyere na votu: "M na-eji ụkwụ ụkwụ m na-anya traktọ". Pasent 29, ma ọ dịkarịa ala otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị a nyochara, na-eji pedal n'okporo ụzọ ma jiri lever draịva n'ọhịa.
G Thomas Göggerle / agrarheute Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị a jụrụ ajụjụ naanị na-ebufe transmissions stepless
traktọ na-eji ome osooso.
O doro anya na ọgbọ ochie nke Vario nwere ike ịnye azịza ya “Ana m eji traịdụ m na-anya traktọ mgbe niile, anaghị m ejikwa njikwa nnyefe igwe ọ bụla TMS na Fendt Vario traktọ ). Na pasent 8, nke a bụ atụmatụ ịkwọ ụgbọ ala na ihu ọma kachasị dị na nyocha anyị.
Mbupute mbu nke Vario enweghị njikwa mbugharị moto (TMS). Fdị Fendt dị ugbu a nwekwara ike ịkwaga na-enweghị TMS, mana ọ bụrụ na ọkwọ ụgbọala na-arụsi ọrụ ike na-arụ ọrụ.
A sị ka e kwuwe, pasent 12 nke ndị ọkwọ ụgbọala traktọ na nyocha anyị na-ebufe naanị ihe nyocha.
Nsonaazụ ahụ doro anya na Facebook. Enwere naanị nhọrọ abụọ dị ebe a. Pasent 75 nke ndị sonyere na-anya traktị ha n'okporo ụzọ ya na pedal accelerator na n'ọhịa na lever na-adụkọta.
Ihe dị iche n'etiti mgbasa Fendt Vario na John Deere AutoPowr
Ma ị jiri draịva draịva gbaa ụgbọala traktọ ma ọ bụ jiri ihe osiso na-adabere na ụdị ahụ. Ndị isi ahịa abụọ John Deere na Fendt na-enye nhọrọ dị iche iche:
Fendt ọkwọ ụgbọala karịsịa nwere ikpebi ma ịchịkwa Vario nọgidere agbanwe nnyefe na draịva lever ma ọ bụ na pedal. Mgbe ahụ onye ọkwọ ụgbọ ala na-pịa bọtịnụ dị n'akụkụ njikwa ma gbanwee n'etiti ọnọdụ ịkwọ ụgbọala.
Na iwebata nke CommandPro ụgbọala menjuobi , John Deere ndị ọkwọ ụgbọala site na 6R n'ihu na-ejikwa ya drive menjuobi.
N'adịghị ka akara Dieselross, ndị ọkwọ ụgbọala John Deere ekwesịghị itinye onwe ha na aka bọtịnụ, mana jiri draịva draịva ma ọ bụ jiri ụkwụ ha zọọ ụkwụ na ụkwụ.
Ọ na-anọdụ ala n'ụzọ dị nro ozugbo ma rụọ ọrụ nwere ike ịmụta ngwa ngwa. Anaghị agbanye ụkwụ wiil ahụ site na ala. Ọ bụrụ n’ịga n’ihu, ị ga-eme osooso; azu azu. Omume osooso gbanwere usoro atọ site na bọtịnụ push na CommandPRO.
Ọ bụrụ na ịkwanye onye na-ejide ya n'aka nri, onye na-anya ụgbọelu na-arụ ọrụ otu n'ime ụgbọ mmiri abụọ ahụ. Enwere ike iji ọrụ a rụọ ọrụ dị ka njikwa ụgbọ mmiri nke atọ. Ọ bụrụ na ị dọpụta onye na-ejide ya ụzọ niile, 6230R na-abanye n'ọnọdụ nkwụsi ike. Traktọ ahụ na-agbadata n'onwe ya ruo mgbe ọ bịara na nkwụsị (arụsi ọrụ ike).
Olee otú ị na-akwọ traktọ na a na-agbanwe agbanwe nnyefe na ihe bụ uru nke gị họọrọ ịkwọ ụgbọala atụmatụ? Dobe anyi azịza gị na ihe ndị dị n'okpuru!
Pedal ma ọ bụ lever: nke a bụ otú ndị na - agụ akwụkwọ anyị si anya na - ebugharị na - agbanwe agbanwe
Tags: igwe oru ugboakukuNduku akuku
Belata nje virus - mkpa usoro dị nso
Prince Edward Island Nduku na-egbusi n'efu
8 afọ gara aga
United Kingdom na-azụ ahịa Ngwaahịa Nduku